Margarekha नेपालका कम्युनिस्ट चरित्र, आचरणको पार्टी छैन । यहाँ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू सबै कमाउनिस्ट हुन् संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव – Margarekha
नेपालका कम्युनिस्ट चरित्र, आचरणको पार्टी छैन । यहाँ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू सबै कमाउनिस्ट हुन् संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव
स्थानीय निर्वाचनका बेला आ–आफ्नै पार्टीबाट चुनाव लडेका मधेसका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम अहिले तालमेल गरेर चुनावमा होमिएका छन् ।
उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसवादी दलको सरकार बनाउने हो । त्यसो त यी दुई दलबीचको तालमेललाई पार्टी एकताकै निष्कर्षमा पुर्याउने बहस पनि भइरहेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सप्तरी–२ बाट प्रतिनिधिसभातर्फ उमेदवार बनेका छन् । र, उनलाई टक्कर दिँदैछन्, पूर्व सिँचाइमन्त्री उमेश यादवले । उनी वाम गठबन्धनका उमेदवार हुन् ।
चुनावी प्रचारप्रसार, घरदैलो, कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त रहेका उपेन्द्र यादवसँग स्थलगत रिपोर्टिङका लागि सप्तरीको राजविराज पुगेका बाह्रखरीकर्मी अक्षर काका र शिवनारायण गिरीले गरेको कुराकानी–
मधेस लामो समय आन्दोलनले आक्रान्त बन्यो, अहिले निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको, कस्तो छ चुनावको माहौल ?
उत्साहवद्र्धक छ । आफ्ना हकअधिकारका निमित्त बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्न तत्पर भएका मधेसका जनता निर्वाचनमार्फत आफ्ना हकअधिकार सुरक्षित गर्न तम्तयार छन् ।
मतदाताहरूको अपेक्षाचाहिँ के छ ?
यो क्षेत्र आर्थिक रूपले अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्र हो । आफ्ना हक र अधिकारप्रति बढी सचेत छन् । राज्यले अन्य क्षेत्रलाई दिए सरहको बराबर अधिकार चाहियो, सँगै विकास हुनुपर्यो भन्ने जनताको विशेष चाहना रहेको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले निर्वाचनलाई ‘आन्दोलनकै निरन्तरता’ भन्नुभएको छ, संघीय समाजवादी फोरम नेपालको धारणाचाहिँ के छ यसमा ?
चुनाव एउटा संघर्ष हो । चुनावी संघर्षको प्रक्रियामा छौँ । सबै आन्दोलनको अन्तिम परिणाम निर्वाचनले त देखाउने हो ।
राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच स्थानीय तहमा तालमेल हुन सकेन, अहिलेचाहिँ तालमेल गरेर अघि बढ्नु भएको छ, फेरि पार्टी एकताको कुरा पनि आइरहेको छ, सम्भव होला ?
हिजोका कुरा छाडौँ, अहिले चुनावमा सिटका तालमेल हामीले गरेका छौँ । यसमा कति सफल हुन्छौँ, कस्तो परिणाम आउँछ, हेर्न बाँकी नै छ । यो सफल भयो भने मात्रै, परिस्थितिले राम्रो रिजल्ट दियो भने मात्रै पार्टी एकताको विषयमा सोच्न सकिन्छ । राम्रो रिजल्ट दिएन भने अघि नबढ्न पनि सक्छ ।
फेरि पार्टी एकता हठात् हुने कुरा होइन, त्यसका लागि सिद्धान्त मिल्नुपर्यो । विचार मिल्नुपर्यो । सिद्धान्त–विचारका विषयमा घनिभूत र सघन छलफल हुन जरुरी छ । त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ । तर, भविष्यमा हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन ।
दुई नम्बर प्रदेशमा कांग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादी शक्ति मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा छ, तर त्यो अवस्था त निर्माण भएन, फेरि तपाईंको मुद्दा त वामसँग बढी मिल्छ नि हैन ?
मुद्दाका हिसाबले माओवादीको भाषासँग हाम्रो भाषाशैली मिल्छ, धेरैजसो । संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता माओवादीसँग बढी मिल्छ । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासका कुरामा कांग्रेससँग बढी मिल्छ । हामी समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ । सोसियल पार्टी हुनुका नाताले सामाजिक न्यायका कुरा एउटासँग मिल्ने र प्रजातन्त्र एउटासँग मिल्ने । र, त्यो पार्टी हामीमात्रै भएकाले त्यस्तो देखिएको हो ।
कांग्रेससँग दुई नम्बर प्रदेशमा चुनावी तालमेल हुन नसक्नुको कारण के हो ?
सप्तरी–२, जहाँ म उमेदवार छु, त्यहाँ कांग्रेसले सघाउने कुरा गरेको छ, तथापि उहाँहरूको उमेदवार पनि हुनुहुन्छ । हामीले पनि सुनसरी छाडेका छौँ, जितेकै सिट छाडेका हौँ । केही ठाउँमा समझदारी भएको छ ।
तर कतिपय ठाउँमा तपाईंका उमेदवारले छाड्न मानेनन् नि ?
जहाँ तालमेल भएको छैन, समझदारी भएको छैन, त्यहाँ त उमेदवार हुने नै भयो नि ! समझदारी भएको ठाउँमा तालमेल हुन्छ, अन्यत्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
तपार्ईं विगतमा सुरसरी र मोरङबाट चुनाव लड्नुहुन्थ्यो, यसपटक कोसीवारि चुनाव लड्न आउनुभयो नि ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा यस्तोे कुनै प्रावधान छ र एउटा जिल्लाको मानिस अर्को जिल्लामा गएर उमेदवार बन्नुहुँदैन भन्ने ? छैन । संसदको निर्वाचन देशको जुनसुकै कुनाबाट जो कोही लड्न पाउँछ ।
हिजो तपाईं भन्दै हुनुहुन्थ्यो– मधेसलाई आठ जिल्लामा मात्रै सीमित राखियो, फेरि तपाईं पनि त्यही आठ जिल्लाभित्रकै एउटा क्षेत्रमा चुनाव लड्न आउनुभएछ, किन ?
यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन, दुई नम्बर प्रदेशलाई नै कार्यक्षेत्र बनाउने गरी नै आएको हुँ । यद्यपि १ नम्बरमा सुविधासम्पन्न, विकसित, तुलनात्मक रूपमा आधुनिक भइसकेको ठाउँ भएता पनि त्यसलाई छाडेर पछाडि नै भएको भए पनि पछि परेका जिल्लाहरूमै काम गर्ने र दुई नम्बर प्रदेशलाई बनाउने नै भनेर आएको हुँ ।
दुई नम्बर प्रदेश अरू प्रदेशको तुलनामा पछाडि पर्नुको कारण के हो ? चुनावैपिच्छे प्रतिनिधि जिताएर नपठाएको पनि होइन ?
मुख्य कारण भनेको राज्यको उपेक्षा र उदासीनता नै हो । उद्योगधन्दा कलकारखाना नहुनु नै हो । यहाँका अधिकांश किसानहरू परम्परागत कृषिमा मात्रै आफ्नो जीविका चलाउन बाध्य छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नै दिएन ।
विकास निर्माणमा राज्यले लगानी गर्दै गरेन । लगानी नगर्ने विभेदपूर्ण नीति राज्यले लिएकैले दुई नम्बर प्रदेश पछाडि परेको हो ।
सप्तरीमा विगतको निर्वाचनमा वामको अवस्था राम्रै थियो । अहिलेको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?
तराईको मानसिकता कम्युनिस्टलाई मन पराउने मानसिकता होइन । तराईका जनता लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छन् । लोकतन्त्र नै उनीहरूले मन पराउने व्यवस्था हो । र, उनीहरू कुनै पनि अधिनायकवादलाई मन पराउँदैनन् । अव नेपालमा कम्युनिस्ट कहाँ छन् ?
आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दै तपाईंकै आँखा अघिल्तिर मत मागिरेका छन् त, तराई– मधेसका शोषित उत्पीडित अधिकार स्थापित गर्छौं पनि भन्दैछन् !
अहिले नेपालका नामी माफियाहरू कुन पार्टीमा छन्, मलाई भन्नूहोस् त ! तस्करहरू, भ्रष्टहरू सबैले कम्युनिस्टका खोल ओढेका छन् । नेपालका कम्युनिस्ट चरित्र, आचरणको पार्टी छैन । यहाँ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरू सबै कमाउनिस्ट हुन् । अतः कम्युनिस्ट आयो, आउँदैछ भन्नु, डर पाल्नु बेकारको कुरा हो ।
तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ– तराईंमा अशिक्षा छ, अस्वास्थ्य छ, अविकास छ । सपना बाँड्न उनीहरू नै अगाडि छन् । त्यसैले तराई–मधेसको मत वामतिर आकर्षित हुँदैन त ?
गरिब, निमुखाको मत कम्युनिस्टले पाउने भए अफ्रिकामा किन कम्युनिस्ट पार्टी झ्यांगिएन ? फस्टाएन ? किन अफ्रिकी जनता कम्युनिस्टलाई घृणा गर्छन् ? सबैभन्दा गरिबी, बेरोजगारी त त्यहाँ छ । तर, त्यहाँ कम्युनिस्ट छैनन् । त्यसैले त्यो सोच र चिन्तन गलत हो । अहिले त जहाँ ठूला माफिया छन्, त्यहाँ कम्युनिस्ट छन् । जहाँ ठूला तस्कर छन्, त्यहाँ कम्युनिस्ट छन् ।
सप्तरी–२ को विकासका लागि तपाईंको योजना के छ ?
सप्तरी–२ लाई मधेस प्रदेश बनाउने हो । जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो । र, लगानी भित्र्याउन प्रयास गर्ने हो । मलाई लाग्छ– यहाँको गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्ति पाउन आर्थिक विकास पहिलो शर्त हो । आवश्यकता हो । त्यसका लागि प्रयास गर्ने छु ।
प्रदेश नम्बर–२ मा कसको सरकार बन्छ, गैरमधेसवादी दलको, या मधेसवादी दलको ?
निश्चितरूपमा मधेसवादी दलको सरकार बन्छ ।
पछिल्ला निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने त्यो सम्भावना कम देखिन्छ नि ?
०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई भन्दा बढी ल्याएको थियो । अहिले बहुमत ल्याउन पनि सक्ने अवस्था पनि छैन, किन ? राजनीतिक दलको प्रभावकारिता र उतार–चढाव भई नै रहन्छ । यो लोकतन्त्रमा कुनै अनौठो कुरा होइन ।
मधेसका मतदातालाई यहाँहरूले गर्ने आग्रह के हो ?
यहाँका मतदाता परिवर्तन, विकास र अधिकारका लागि संघर्षशील हुनुपर्छ । अन्यकुराबाट प्रभावित भएर मत हाल्नुहुने छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।१२ खरीबाट
४ मंसिर २०७४, सोमबार १२:२१ प्रकाशित